Yiziphi izinhlobo zamafu nezici zawo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukubheka isibhakabhaka nokubona amafu kuyinto evame kakhulu. Amafu awakhombisi nje kuphela imvula neziphepho, kepha angasinika ulwazi ngesimo sezulu. Kukhona okuhlukile izinhlobo zamafu esibhakabhakeni futhi ngasinye sinezici ezihlukile nezimo zokuziqeqesha. Kulesi sihloko sizofunda ngezinhlobo ezahlukahlukene zamafu, ukuthi asho ukuthini nokuthi kungani akha.
Ngabe ufuna ukufunda kabanzi ngezinhlobo zamafu? Qhubeka ufunde futhi uzothola konke.
1 Lenzeka kanjani ifu
2 Amafu aphezulu
3 Amafu aphakathi nendawo
3.2 IStratus ephakeme
4 Amafu aphansi
5 Ukuthuthukiswa okuqondile kwamafu
5.1 Amafu weCumulus
Lenzeka kanjani ifu
Ngaphambi kokuba siqale ukuchaza izinhlobo zamafu kufanele sichaze ukuthi akheka kanjani. Ukuze kube khona amafu esibhakabhakeni, kufanele kube nokupholisa umoya. "I-loop" iqala ngeLanga. Lapho imisebe yelanga ishisa ubuso bomhlaba, ibuye ishise nomoya ozungezile. Umoya onamazinga okushisa aphakeme uba mncane kakhulu, ngakho-ke uvama ukukhuphuka futhi indawo yawo ithathelwe umoya obanda kakhudlwana nonesisindo. Njengoba ukhuphukela phezulu, i-gradient eshisayo yemvelo ibangela ukuthi amazinga okushisa abe phansi. Ngalesi sizathu, umoya uyaphola.
Lapho ifinyelela ungqimba olupholile lomoya, ihlangana ibe umhwamuko wamanzi. Lo muhwamanzi awubonakali ngamehlo, ngoba yakhiwe ngamaconsi amanzi nezinhlayiya zeqhwa. Izinhlayiya zincane ngosayizi ukuthi ziyakwazi ukubanjwa emoyeni ngamagagasi amile mpo.
Umehluko phakathi kokwakheka kwezinhlobo ezahlukahlukene zamafu kungenxa yamazinga okushisa efudumele. Kunamanye amafu akha emazingeni okushisa aphezulu kanti amanye aphansi. Okuphansi kokushisa kokwakheka, ifu "likhulu". Kunezinhlobo ezithile zamafu ezinikezayo imvula nezinye ezingakwenzi lokho.
Uma izinga lokushisa liphansi kakhulu, ifu elenzayo lizokwakhiwa amakristalu eqhwa.
Enye into ethinta ukwakheka kwamafu ukunyakaza komoya. Amafu enziwa lapho umoya uphumule athambekele ekubonakaleni kwezingqimba noma imicu. Ngakolunye uhlangothi, lezo ezakhiwa phakathi komoya noma umoya onemisinga eqondile eqondile ziveza intuthuko enkulu eme mpo. Imvamisa izimvula zakamuva ziyimbangela yemvula futhi izivunguvungu.
Sizohlukanisa izinhlobo ezahlukahlukene zamafu ngokususelwa ebangeni eliphakeme lapho akha khona.
Bangamafu amhlophe, asobala futhi angenazithunzi zangaphakathi. Zivela njengeyaziwayo «imisila yamahhashi». Azilutho ngaphandle kwamafu akhiwe ngu amakristalu eqhwa ngenxa yokuphakama lapho zikhona. Zifana nemicu emide, emincane enokusatshalaliswa okungaphezulu noma okuncane ngendlela yolayini abafanayo.
Kungabonakala ngeso lenyama ukubuka isibhakabhaka futhi ubone ukuthi kubonakala kanjani ukuthi isibhakabhaka besipendwe ngemivimbo yokuxubha. Uma isibhakabhaka sonke simbozwe amafu e-cirrus, kungenzeka kakhulu ukuthi emahoreni angama-24 alandelayo kuzobakhona ushintsho olungazelelwe lwesimo sezulu. Ngokuvamile, kuvame ukushintsha kokuncipha kwamazinga okushisa.
Lawa mafu akha ungqimba cishe oluqhubekayo olunokubukeka kwangaphandle okushwabene futhi olunobubuso obuyindilinga njengokungathi ama-flakes amancane kakotini. Amafu amhlophe qwa ngaphandle kokwethula isithunzi. Lapho isibhakabhaka sibonakala simbozwe ngalolu hlobo lwamafu, kuthiwa siyabhoreka. Kufana nokwelukwa kwezimvu.
Zivame ukuvela eceleni kwamafu e-cirrus futhi khombisa ukuthi isimo sezulu siyashintsha cishe amahora ayishumi nambili. Lapho zivela, kuvame ukuba nesiphepho. Ngokusobala azikhombisi okufanayo ngaso sonke isikhathi. Uma kunjalo, isimo sezulu nesimo sezulu kungaba lula kakhulu.
Babonakala ekuboneni kokuqala njengeveyili lapho kunzima khona ukuhlukanisa imininingwane. Kwesinye isikhathi imiphetho ingabonwa njengoba inde futhi ibanzi. Zibonakala kalula ngoba zakha i-halo esibhakabhakeni zizungeze ilanga nenyanga. Imvamisa zenzeka kumafu we-cirrus futhi zikhombise ukuthi isimo sezulu esibi noma ezinye ibunzi elifudumele.
Amafu aphakathi nendawo
Phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zamafu aphakathi sithola:
Bangamafu amise okwe-flake amaphakathi ngobukhulu anesakhiwo esingajwayelekile. Lawa mafu ahlinzeka ama-flakes kanye nama-ripples engxenyeni yawo engezansi. I-Altocumulus khombisa ukuthi isimo sezulu esibi siyaqala kungaba yimvula noma iziphepho.
Lawa amafu anezendlalelo ezincanyana nezinye izindawo ezijiyile. Ezimweni eziningi ilanga liyabonakala ngesembozo sefu. Ukubukeka kufana namabala angajwayelekile. Zibonisa imvula enhle ngenxa yokwehla kwezinga lokushisa.
Basondele kakhulu ngaphezulu. Phakathi kwabo sine:
Zibonakala njengolwelwesi olujwayelekile olumnyama olumnyama olunamazinga ahlukahlukene wokukhanya. Kungenxa yokuthi ukuminyana kuyahlukahluka kulo lonke ifu. Zijwayelekile ezimvula zasentwasahlobo nasehlobo. Zitholakala futhi emvuleni ngendlela ye- nieve.
Yilezo ezinokususwa okufana namasilinda ahlanganisiwe. Futhi zinezimpawu ezithile ezinemibala ehlukene yegrey. Akuvamile ukuthi zilethe imvula.
Ukubukeka kungokwesikhumba esimpunga ngaphandle kokubona izakhiwo ezichazwe kahle. Inezinqa ezithile zamazinga ahlukene wokukhanya. Phakathi nezinyanga ezibandayo bayakwazi ukubekezelela usuku lonke, okwenza indawo ibukeke imnyama ngokwengeziwe. Uma kufika intwasahlobo bavela ekuseni kakhulu futhi bahlakazeke emini. Ikhombisa isimo sezulu esihle.
Ukuthuthukiswa okuqondile kwamafu
Lawa amafu aletha amadigri amakhulu osayizi nemvula.
Banokubukeka okushisayo nezithunzi ezimakwe kakhulu, kuze kufike ezingeni lokuvimba ilanga. Bangamafu ampunga. Isisekelo saso sivundlile, kepha ingxenye yaso engenhla inezingqimba ezinkulu. Amafu we-Cumulus ahambelana nesimo sezulu esihle lapho kunomswakama omncane omncane nokunyakaza komoya okuqondile mpo. Bayakwazi ukudala imvula neziphepho.
Bangamafu amakhulu futhi abukeka kakhulu ngobuningi ngokuthuthuka okukhulu mpo. Zimpunga ngombala futhi zimboza ilanga ngokuphelele. Lezi yizona ezijwayelekile ezenzeka lapho kunezivunguvungu zize zikhiqize nesichotho.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda ukukhomba amafu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amafu » Izinhlobo zamafu
Kuhle, esigabeni samafu aphansi akulungile, kukhona okuthathu (kusuka kokungenabungozi kuya kokuyingozi) okokuqala kukhona i-cumulus eyifu elincane elimhlophe, bese kuba khona i-cumulonimbus (isithombe sokuqala) esinombala omhlophe ngenhla kanye nempunga ngezansi, akhombisa imvula neziphepho, ziyingozi kakhulu ngamatshe amakhulu eqhwa ngaphakathi. Futhi ekugcineni i-torrecumulus (isithombe sokugcina) iyingozi kakhulu kunemimoya eminingi ekhuphuka nehlayo.
URicardo Ruiz kusho
Uphuthelwe yinkungu neziphepho?
Phendula uRicardo Ruiz
Ngenza ukulungiswa, ekuphawuleni kwami ​​kwangaphambilini bengibhekise kumafu aqonde mpo, lawo anesisekelo esigabeni esiphansi bese enyukela esigabeni esiphakathi. Amafu we-Cumulus aphansi kuphela futhi lapho uthi amafu aphansi ingxube phakathi kwamafu aphansi naphakathi. Ngiyethemba ngisizile
Ngiyabonga ngalolu lwazi olungakholeki ukuthi lungisizile ngomsebenzi wami 😅😅 futhi ngiyabonga futhi lolu lwazi lubaluleke kakhulu futhi luyaqondakala ngisho nangamagama anzima
Ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi babelane ngalolu lwazi njengoba lunikeza izihloko zengxoxo ngesikhathi somlingani 😂😂
Ngiyabonga ulwazi luhle kakhulu lungisize kakhulu !!! 😁😁